Zimbabwe: Succession Triggers Turmoil - allAfrica.com
Zimbabwe: Succession Triggers Turmoil
Harare — THE military takeover of President Robert Mugabe's government by the Zimbabwe Defence Forces (ZDF) in the early hours of Wednesday morning is the culmination of prolonged intense factional battles triggered by the veteran nonagenarian leader's failure to put in place a proper succession plan.
Mnangagwa's faction was to suffer another setback five years later against the late retired army commander Solomon Mujuru faction. After having secured endorsements from seven provinces, namely Masvingo, Midlands, Manicaland, Matabeleland North, Matabeleland South, Bulawayo and Mashonaland West for Mnangagwa to replace the late Simon Muzenda as Vice-President, Mugabe then inserted a clause stating that one of the party vice-presidents should be a woman -- a resolution made in connivance with the Mujuru faction in order to block Mnangagwa's rise. The beneficiary of that clause was Mujuru's wife, Joice, who was catapulted to the post with Mugabe even intimating that she should be the one to succeed him.
The Mujuru faction would become a thorn in Mugabe's flesh two years later at the 2006 Zanu PF conference in Goromonzi when they rejected his plan to extend his presidential term for another two years from 2008 to 2010 without elections so as to harmonise the polls.
Mugabe's differences with the Mujuru faction are believed to have been a major contributor to his first-round defeat to MDC-T leader Morgan Tsvangirai in the 2008 presidential poll. Mujuru's faction is believed to have campaigned against Mugabe's presidential bid through the bhora musango campaign where party supporters were urged to vote for Zanu PF parliamentary candidates but not for Mugabe. The bitter taste of this defeat, which eventually forced Mugabe to work with Tsvangirai in the inclusive government, was to have severe recrimination for Mujuru six years later.
A year after Zanu PF secured a five-year mandate to rule in the 2013 harmonised elections, Mugabe's wife Grace entered the political fray after being ushered in as the Women's League secretary.
AllAfrica editor's note: Mugabe resigned on Tuesday November 21.